कोभिड नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा एसियामा भियनताम र केरला सरकारको प्रयत्नलाई प्रभावकारी मानिएको छ । यी दुवै वामपन्थी सरकार हुन् । नेपालमा चाहिँ दुईतिहाइको वामपन्थी सरकार किन यस्तो शिथिल देखिएको ? कतै आवरणमा वाम तर आचरणमा दामपन्थी भएर त होइन ?
कालीन परिवर्तन पनि धेरै महŒवपूर्ण काम हो । कृपया कम्युनिस्ट सरकारलाई दोष नदिनुहोस् !
मेरा एक जना मित्र एक पटक झापाका एक जना चल्तीका नेताको घर पुगेका रैछन्, कामले । आफूलाई माक्र्स–लेनिनकै पनातिझैँ ठान्ने ती कथित कमरेडले यसो भनेछन्– ‘कमरेड ! म त छुवाछुत–जातपात केही मान्दिनँ कि, तर बूढा भएका आमाबाको चित्त दुखाउन पनि सक्दिनँ । सित्तल पनि छ, बाहिरै बसेर चिया पिऊँ है ।’
के बिगारे त नि ? आफ्नु घर, आफ्नु अधिकार ।
जातिका नाममा हुने यस्ता हिंसामा पनि वर्गकै नाममा भएको हिंसात्मक अतीतको गन्ध आउँछ । हिंसाको महिमा गायन र हिंसाचारीको उन्मुक्ति हुँदासम्म यस्तो हिंसा रोकिँदैन । समाजले एकैस्वरले रुकुममा भएको मध्ययुगीन बर्बरताको निन्दा गरौँ र दोषीहरूमाथि कानुनबमोजिम कडा कारबाही माग गरौँ ।
मान्छे मार्नु गलत हो । एकपक्षीय नबनौँ । यसमा जातभन्दा पनि गरिएको व्यवहार र तरिका गलत छ ।
प्लेटोले भनेका थिए– सबभन्दा घृणा गरिने मानिस त्यो हुन्छ, जसले सत्य बोल्छ । नेपाली समाजको अहिलेको सबभन्दा ठूलो सत्यः रुकुमको नरसंहार जातपातजन्य विभेदको पछिल्लो कडी हो । यो सत्य बोल्ने साहस गरौँ ! एक अश्वेतको हत्याले अमेरिका जलिरहेको नभुलौँ ! त्यहाँः ब्ल्याक लाइभ्ज म्याटर ! यहाँः दलित लाइभ्ज म्याटर !
रुकुमको घटना निन्दनीय छ र जातीयताकै कारणले उब्जिएको हो । तर, त्यसमा संलग्न भनिएकाहरू तपाईंको स्कुलिङमा हुर्केका भनिएको छ । अब जात फेरेर हुन्छ र, विचार चाहिँ खिया लागेको रोपिदिएपछि ?